Qopha Ukuvakashela Isivakashi seVenezuel
Ngo-Ephreli 28, umlingani waseVenezuela eChina weza enkampanini yethu ezohambela imikhiqizo yethu engenacala futhi washiya isithombe esibalulekile.
Muva nje, igciwane le-pneumonia lisongela impilo nokuphepha kwabantu bonke. Ngemuva cishe kwezinyanga ezimbili zomsebenzi onzima, abantu baseChina nabasebenzi baseChinese bezokwelapha nabahlengikazi ekugcineni bathole impumelelo eyisisekelo ekulweni nalolu bhubhane, futhi ukukhiqizwa kwasekhaya kanye nempilo sekubuyele kwesejwayelekile. Kwamanye amazwe kanye nabantu abasabhekene nosongo lwalesi bhubhane, sizwelana kakhulu futhi sizwa imizwa efanayo. Bobabili uhulumeni waseChina nabantu base China bazama konke okusemandleni abo ukusiza la mazwe nabantu abadinga usizo. Siyethemba ukuthi lokhu kusongelwa okuvela kuso sonke isintu - i-covid-19 kuzosuswa ngokushesha okukhulu futhi abantu bazobe bephephile futhi benempilo. Ngemuva kwakho konke, ngaphansi kweqhaza lomphakathi wesiphetho sabantu, sidinga ukusizakala futhi sisebenzisane.
Ekuphenduleni isimemo sokubambisana komhlaba wonke, iFinzone Doors & Windows Company yethu iqinise ngenkuthalo ukusebenzisana nabalingani bayo ekhaya nakwamanye amazwe ukufeza inzuzo.Ukuvakasha kwakamuva okwenziwa izivakashi zaseVenezuelan ikakhulukazi ukuvakashela uchungechunge lwemikhiqizo yethu engenacala - Finzone30.Finzone30 njengoba ukuthuthukiswa kwakamuva kochungechunge olungenacala, ngezinzuzo eziningi, izivakashi ziyaneliseka kakhulu, kepha futhi ngathi ukukhulisa imakethe yokuthengisa eSouth America kwenziwe umnikelo omkhulu.
umlingani wethu wathi uFinzone yikho akubona njengamanje, imikhiqizo eyahlukaniswa kakhulu, esesikhathini kakhulu, yakamuva, eduzane kakhulu nezidingo zomkhiqizo wamakhasimende. Ngokukhulukazi emkhiqizweni muhle, uyasebenza, uphephile, uhlala isikhala esincane nezinye izinzuzo. Asiziqhoshi ngamahloni, siyazenzela izivakashi imikhiqizo engcono kakhulu, insiza engcono kakhulu.
Futhi sethemba ngokweqiniso ukuthi ngemuva kokuphela kwalo bhubhane, abangane abaningi bamazwe omhlaba bangeza ukuzovakashela ifektri yethu, baqonde imikhiqizo yethu, futhi babambisane kakhulu neFinzone.
Isikhathi sokuthumela: Apr-28-2020